News – Page2– RISE
ENDO had successfully completed teacher training in Khamti
Summer Vacation Teacher (SVT) Trainingorganized by ENDO(Eastern Naga Development Organization) from 3rd-20th April has successfully completed in Khamti Township with total number of 83 participants.
Teacher Roles and Responsibilities, Teaching Methods, Learning Styles, Classroom Management, Lesson Planning and Nagamese language were provided during the training.
Kaing Win,aMobile Teacher Trainer, who is one of the trainers during SVT said, “This my first time to give SVT training and it wasabit challenging for me, especially when giving training to trainees those who’re speaking different languages even though we are all Naga but with different dialects. As you know, we, Naga, have many different tribes and dialects. Therefore, I have to use English asamain language during the training”.
He also states that the trainees were very enthusiastic during training with lively discussion and questions. They gained skills and capabilities to becomeabetter teacher for the children in Naga areas when they are back to their schools.
In the meantime, another SVT, organized by ENDO, is still ongoing in Lay Shi Township till 26th April.
သီပေါမြို့ နယ်ဝမ်စိုင်းရွာတွင် TEES အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဆက်လက်ပြုလုပ်
TEESတဖြစ်လည်း ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများမှအစပြုတည်ထောင်သည့်ပညာရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုအား ပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ ၁ရက်နေ့ မှစတင်ကာ သီပေါမြို့ နယ်၊ ၀မ်စိုင်းကျေးရွာ၌ သင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားပေါင်း ၅၈ဦးဖြစ်သည့် နမ့်လန်းမြို့ နယ်မှ ၄၆ဦး၊ တန့့်ယမ်းမြို့ နယ်မှ ၁၀ဦးနှင့် မိုးနဲမြို့ နယ်မှ၂ဦးတို့ မှတက်ရောက်က လာမည့်ပညာသင်နှစ်တွင် TEES ဆရာ၊ ဆရာအဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့်သူများဖြစ်ပါသည်။
ကနဦးအစီအစဉ်အနေဖြင့် TEESအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပဲကို ဧပြီလ၁နေ့ မှဧပြီလ ၁၂အထိသတ်မှတ်ထားပြီး သင်္ကြန်ကာလအတွင်း တစ်ပတ်တာယာယီရပ်ဆိုင်းထားကာ သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြီးဆုံးသည့်နောက် ဧပြီလ ၁၉ရက်နေ့ မှမေလ ၆ရက်နေ့ အထိဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏သင်တန်းဆင်းပွဲကိုမူ မေလ ၇ရက်နေ့ တွင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ကျေးလက်ဒေသပညာရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြိုရေးအဖွဲ့CRED(Central for Rural Education and Devilopment) ထံမှသိရသည်။
TEES Training Continue Happen in Hsipaw Township
The TEES(Teacher Establishing Education Services) training has been conducted from April 1, 2019 at the Warn
Zeing Monastic School in Warn Zeing, Hsipaw Township.
The number of the trainees are 58 : (46 from Namlan area, 10 from Tarnt Yann Township and2from Merng Nai (Moe Nai) township. All of them will be committed to work as the TEES in the next coming academic year.
The first period of the training was from April 1 to April 12. The training paused for one week for the water festival and will restarted the training on April 19 for the second period until May 6, 2019. CRED will have the closing ceremony on May7in the morning.
Summer Vacation Teacher-Training Happening in Indigenous Areas
Summer Vacation Teacher-Training (SVT) is now happening in Kachin, Kayan, Karen, Chin, Zomi, Lahu, Pa-Oh, Ta’ang, and Shan areas where RISE Partners operate.
This year, the RISE Partners identified the following topics of the SVTs: Learning styles and multiple intelligence, Classroom management, Child psychology /development, Lesson planning, Teacher roles and responsibilities, Teaching and learning materials, Questioning skills, Learning assessment, Teaching cycle, Early childhood care and development, Mother tongue literacy and culture, KG teaching methods, Math and Science teaching methods, SMC and PTA, Communication, Child rights, Time management, Leadership and Human rights.
Summer Vacation Teacher Training in Layshi, Eastern Naga region
According to Sayar Saw Thwee from RISE’sTraining Team who assisted in some of the SVTs, some of the topics identified by the partners were changed based on the training plan of the Government Trainers who were invited to facilitate the SVTs. “The training topics’ title might have been changed, but the concepts were similar”, added Sayaw Saw Thwee.
Sayarma Nan Chaw,aMobile Teacher Trainer (MTT), who gaveatraining at Ban Matt, Pa-Oh area said, “I was really excited for this training because it was my first time to do this. This experience made me feel more confident, taught me how to better prepare for similar training activities, and gave me an opportunity to get feedback from the trainees on how I further improve myself asatrainer.”She added, “I also realized that my lesson plan has weak points because I had limited time to prepare but I will definitely improve it for my future trainings.”
The SVTs started last March and will be completed in April with an estimated reach of more than 1,000 trainees from various indigenous areas.
တိုင်းရင်းသားဒေသ၌နွေရာသီကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမသင်တန်းစတင်ပို့ ချ
ယခုနှစ်မတ်လမှစ၍တိုင်းရင်းသားဒေသများအသီးသီး၌နွေရာသီကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းအား ရိုက်၏မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများဖြစ်ကြသည့် ကချင်၊ ကယန်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဇိုမီး၊ နာဂ၊ လားဟူ၊ ပအိုဝ်း၊ တအာင်းနှင့်ရှမ်းဒေသများတွင် ပြုလုပ်နေကြသည်။
ယခုနှစ်တိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးအတွင်းပို့ ချသည့်ဘာသာရပ်များမှာမူ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ဖွဲ့ ချင်းစီ၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်တွင်မူတည်၍ သင်တန်းခေါင်းစဉ်များပို့ ချကာအခြေအနေအရခေါင်းစဉ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသွားတာတစ်ချို့ လည်းရှိကြောင်းသိရသည်။
နွေရာသီသင်တန်းအားသွားရောက်ကူညီခဲ့သည့်ရိုက်စ်သင်တန်းဆရာစောသွီက “အဓိကခေါင်းစဉ်တွေပြောင်းထားရတဲ့အကြောင်းကတော့ အစိုးရဘက်ကဆရာမတွေလည်းလာပြီးကူညီသင်တန်းပို့ ချနေတော့ အချိန်အကန့် အသတ်အရ တစ်ချို့ ခေါင်းစဉ်တွေပြောင်းဖြစ်သွားတာလေးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အစိုးရကလာသင်ပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာတွေကလည်း အခေါ်အဝေါ်သာကွဲတာပါ သင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အတူတူပါပဲ။ ဥပမာ သူတို့ ပို့ ချတဲ့ KGသင်နည်းဆိုရင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့သင်ကြားမှုခေါင်းစဉ်သဘောတရားအပေါ်အခြေခံပြီးလာကူသင်ပေးသွားတယ်။” ဟုသူကပြောသည်။
သင်တန်းအတွင်း၌အဓိကပို့ ချပေးသည့်ဘာသာရပ်များမှာမူ သင်တန်းခေါင်းစဉ်များဖြစ်သည့် သင်ကြားနည်းများ၊ သင်ယူမှုပုံစံများနှင့်ဥာဏ်ရည်အထွေထွေ၊ ကလေးစိတ်ပညာနှင့်ကလေးသူငယ်ဖွံ့ ဖြိုးမှု၊ သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ သင်ထောက်ကူများဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်း၊ မေးခွန်းမေးခြင်းအတတ်ပညာ၊ သင်ယူမှုအားစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ သင်ကြားမှုစက်ဝန်း၊ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးဖွံ့ ဖြိုးမှု၊ မိခင်ဘာသာစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၊ သူငယ်တန်းသင်ကြားနည်းများ၊ ကျောင်းကော်မတီနှင့်မိဘဆရာအသင်း၊ ဆက်သွယ်မှုအတတ်ပညာ၊ နည်းပြခြင်းအတတ်ပညာ၊ ကလေးအခွင့်အရေး၊ အချိန်စီမံခန့် ခွဲခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုအတတ်ပညာနှင့်လူ့ အခွင့်အရေးစသည့်ခေါင်းစဉ်များအားသင်ကြားပို့ ချသွားပါသည်။
နွေရာသီကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်း၊ ဘန်းမတ်ရွာ၊ ပအိုဝ်းဒေသ
ပအိုဝ်းဒေသမှနွေရာသီသင်တန်းပို့ ချပေးနေသည့်ဆရာမနန်းချောက “ကျွန်မနွေရာသီသင်တန်းပေးတာ ဒါပဋ္ဌမဆုံးအကြိမ်ပေါ့နော်။ အစပဋ္ဌမတော့ စိတ်လှုပ်ရှိမိတာပေါ့နော်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းပြန်အားပေးရင်းနဲ့ နောက်တော့လည်းအဆင်ပြေသွားတာပဲ။ သင်တန်းထဲမှာလည်းအကြံပြုပုံးလေးထားပေးတယ်။ အဲဒီမှာကိုယ်သင်တဲ့ရက်ဆိုရင် သင်တန်းသား၊ သူတွေကသူတို့ နာမည်ထည့်ရေးစရာမလိုပဲအကြံပြုပေးရတယ်။ အဲဒီလိုအကြံပြုစာတွေဖတ်ရတော့ ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာအာသာချက်ရှိပြီးဘယ်နေရာမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာသိရတာပေါ့လေ” ဟုပြောသည်။
၎င်းကဆက်လက်ပြီး “ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှာ အားနည်းမှုရှိနေသေးတာကိုတော့ကြုံတွေ့ ရတယ်။ အဓိကကတော့ သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ရေးဆွဲအချိန်မှာ သင်ကြားမှုအချိန်သတ်မှတ်ထားတာနည်းတဲ့အခါကျတော့ သင်လိုက်တဲ့အခါ အချိန်ကိုအများကြီးဆွဲထားရတယ်။ နောက်ပိုင်းကျရင် ဒီ့ထက်ပိုပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုဆွဲရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကြိုပြီးစီစဉ်ထားရမှာပေါ့လေ။”
ယခုနှစ်နွေရာသီသင်တန်းးကာလသည် မတ်လနှင့်ဧပြီနှစ်လတာအချိန်သတ်မှတ်ပြီး စုစုပေါင်းသင်တန်းသူသင်တန်းသားဦးရေ ၁၀၀၀သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အခြေအနေအရလူဦးရေထပ်များလာကြောင်းလည်းသိရသည်။
ADRA-Myanmar ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဖြင့် RISEမှဦးဆောင်ကာ ၄င်း၏မိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် ကချင်၊ ကယန်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဇိုမီး၊ ရှမ်း၊ တအာန်း၊ လားဟူနှင့် ပအို့ ဝ်များပါဝင်သည့် စစ်တမ်းရလဒ်အားတရားဝင်အတည်မပြုခင် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ဒီဇင်္ဘာ ၁၀ရက်မှ ၁၂နေ့ အထိကျင်းပခဲ့သည်။
ယင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စက်တင်္ဘာလမှနိုဝင်္ဘာလအထိ ၃လတာကာလ တိုင်းရင်းသားဒေသအသီးသီးအတွင်းစစ်တမ်းကောက်ယူရရှိရန်အလို့ ငှာ အချက်အလက် ၃ခုဖြစ်သည့် စာဖတ်နိုင်စွမ်းရည်နှင့်တွက်ချက်မှုစွမ်းရည်၊ စာသင်ကြားမှုအားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကျောင်းပြင်ပရောက်ကလေးသူငယ်များပါဝင်ကာ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းရလဒ်များကို ADRA၏စစ်တမ်းပညာရှင်များမှRISEကွန်ရက်အဖွဲ့ အစည်းများအားပြန်လည်တင်ပြကာ လိုအပ်သည်များကိုထည့်သွင်းအတည်ပြုချက်ရယူခဲ့ပါသည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် RISEမိတ်ဖက်ကျောင်းအားလုံး၏ကျောင်းပေါင်း၁၅၉ကျောင်းကိုကောက်ယူခဲ့ကာ ရပ်ရွာအကြီးအကဲများ၊ မိဘ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအားအဓိကဦးတည်ထားပြီးမေးမြန်းခဲ့သည်။ စစ်တမ်း၏၉၀ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဒုတိယတန်းနှင့်တတိယတန်းများဖြစ်သည့်အပြင် မူလတန်းအဆင့်ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးစစ်ဆေးရာတွင် ကျောင်းသူမိန်းကလေးများသည် ကျောင်းသားယောင်္ကျားကလေးများထက် စာဖတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်နှင့်တွက်ချက်နိုင်မှုစွမ်းရည် ၅၂ရာခိုင်နှုန်းရှိနေသည်ကို စစ်တမ်းအရသိရသည်။
ကရင်ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမများသမဂ္ဂ(KTWG)မှဆရာမလယ်ထူးက “ဒီနေရာမှာဘာကိုညွှန်ပြသလဲဆိုရင် ကျောင်းသားကလေးတွေကို ဆရာ၊ ဆရာမတွေကပိုပြီးအချိန်ပေးရမယ်။ ယောင်္ကျားလေးအများစုဟာ အငြိမ်မနေတတ်ကြဘူး။ အတန်းထဲမှာ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီးစာသင်ရတာငြီးငွေ့ တယ်။ အဲဒီတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေကိုဆွဲခေါ်ကိုင်တွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့အခါတိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။”
စစ်တမ်း၏ထွက်ပေါ်လာသည့်ရလဒ်ထဲတွင် ကျောင်းထွက်နိုင်ခြေရှိသည့်ကလေးငယ်များမှာ အညွှန်းကိန်းမြင့်မားနေကာ ၄င်း၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းများထဲမှအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ မိဘများပညာရေးတွင်စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိမှုနှင့် အရေးတယူမပြုမှုများဖြစ်သည်။
ဇိုမီးဖွံ့ ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှဆရာမကိုပီက “ပညာရေးအမြင်ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကျောင်းသားမိဘတွေ ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍမှာ တန်ဘိုးထားလာအောင်နဲ့သူတို့ ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုအားပေးလာအောင်ပါ။ ဒီလိုပညာရေးအမြင်ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း လူဦးရေကသတ်မှတ်ထားတာမရှိပေမယ့် ရွေးချယ်တဲ့နေရာကနည်းတဲ့အခါကျတော့ ထိရောက်သလောက်မထိရောက်တော့ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လူဦးရေသိပ်မများပေမယ့် နေရာအတော်များများလုပ်နိုင်ရင်တော့ ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိမယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အဝေးမှာရှိတဲ့ရွာအများစုက လာရောက်ပြီးမတက်ရောက်နိုင်လို့ ပါ။”
မိခင်ဘာသာစကားသင်ကြားမှုအပိုင်းအားစစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင် ကရင်နှင့်ရှမ်းနှစ်ဖွဲ့ တည်းသာကောက်ယူခဲ့ပြီး ကျန်သည့်မိတ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ အစည်းမှာမူ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကောက်ယူမှုမရှိပဲ မြန်မာဘာသာတစ်ခုတည်းကိုသာစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားဒေသအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သည့်ဤပညာရေးစစ်တမ်းအား လာမည့် ၂၀၁၉ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင်အပြီးသတ်ထုတ်ပြန်သွားရန်ရှိကြောင်းသိရသည်။
Research Validation Workshop Complete
From December 10-12, RISE held its CASE+ project Baseline Research Validation workshop. This research was undertaken from September to November by RISE partners in Kachin, Kayan, Karen, Chin, Zomi, Shan, Ta’ang, Lahu and Pa-Oh areas. Consultants from RISE’s iNGO partner, Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Myanmar, supported the analysis of the raw data from the survey.
The survey focused on three key components: 1) Out-of-school Children (OOSC), 2) Student Literacy and Numeracy (grades 2-3), and, 3) Teacher competency. 159 schools participated in the survey including community leaders, parents, teachers and children.
In terms of literacy in the RISE network area, it was found that girls reading and writing comprehension was slightly stronger than boys. Naw Ler Htoo, Director of the Karen Teacher Working Group said, “What the research showed us here is our teachers must give more time to boy students. Majority of the boy are always active and fidgety. They’re bored to site still the whole day in the class. That’s why, we need to think about teaching skills on how to handle the boy students in the future.”
The research also indicated that children are more at risk to become OOSC if their parents are uninterested in their child’s school education or heldagenerally negative view on the benefits of schooling.
Sayarma Koppi, the focal person from the Zomi Development Foundation (ZDF), expressed that, “When we organized the Education Sensitization Event (ESE), we were focusing on parents to be aware about the importance of their child’s education. The event was successful and we would like to have more for participants who live very far remote and who don’t never haveachance to come to the event.”
In most areas, the Literacy assessments were done for Burmese language, however, in Karen and Shan areas they also did the assessment for their local Karen and Shan mother tongues as well.
This was the very first research of its kind in these indigenous areas and the final report is expected to be released in February 2019.
Jesuit Refugee Service Connects with RISE
The Jesuit Refugee Service (JRS), an organization working in education in rural areas visited RISE to explore possible collaboration opportunities. During the visit, both JRS and RISE shared their experiences working in ethnic education, lessons learned, and good practices.
The group also expressed that they are amazed by RISE’s Teacher Preparation Centre (TPC) which is also similar to JRS’s centre. They commented too that the TPC is more diversed; with participants coming from many ethnic communities.
JRS has been supporting Karenni education in Karenni refugee camps since 1997 up to now.
An 8-year old grade2student in Lwel Mi Na Ka village, Tar Pon track, Keng Tung township was hit byacar died immediately at the scene.
The accident occurred in 30th October at 9am whenastudent, Yaw Sha Hla, who looked after buffaloes on the Mine Khat- Keng Tung highway road was hit byacar. Whenapassenger car was approaching the road, the buffaloes got frightened by the speedy car and ran across the road. The hand of the student was fastened toarope tied to one of the running buffaloes.
“I’ve never witnessed this kind of accident in my life. I was shocked and felt sorry for the student and his family. I tried to console the parents before moving to another village for the survey”, shared by Sayarma Harry Sin who was doingaschool survey in the area.The local police is now investigating the accident for immediate action of the case.
Zomi holds Education Sensitization Event (ESE)
On November, more than 800 community members participated in the Education Sensitization Event (ESE) in the village of Kyain Ton Pi, Te Tain township, Zomi region. According to Sayarma Mu Lwan Po,astaff from RISE Network, half of the participants were children.
“The purpose of the ESE is to raise awareness of the local people on the importance of education. It is also where the community shares their indigenous knowledge and cultural heritage amongst each other since there are many ethnic groups living in one community. At first, we were only expecting around 500 participants, but we were surprised and happy that more than 800 turned up. This tells us that the local people are really interested to know more about ethnic education and how they can be involved.” Shared by Sayarma Mu Lwan Po.
The Zomi Development Foundation (ZDF),apartner organization of the RISE Network, will be doing another ESE on 08-09 December in Oh Darl Khine village, Tun Zan township.
The ESE is an initiative of the RISE Network that started in October 2017 and being implemented by its partner organisations in Kachin, Kayan, Karen, Chin, Zomi, Ta’Ang, and Naga.